Ary hoy Jehovah tamin’i Nôà : midira ao anatin’ny sambofiara hianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria hianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao.” Gen. 7:1
Tamin’ny andron’i Nôà dia niharatsy fatratra ny toetran’ny olona ka tsy naharitra an’izany intsony Andriamanitra; ary hoy Izy hoe: “Haringako tsy hisy ambonin’ny tany ny olona izay noforoniko” Gen. 6:7. Kanefa namindra fo tamin'ny taranak’olombelona ihany Izy ka noho ny fitiavany dia nanomana fialofana ho an’izay te hanaiky an’izany Izy. Nomeny an’i Nôà ny hafatra mba hampitain’i Nôà amin’ny vahoaka: “Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko” Gen. 6:3
Nasaina nanao sambofiara i Nôà no sady nasaina nitory ihany koa fa hahatonga safo-drano amin’ny tany Andriamanitra hoenti-mandringana ny ratsy fanahy. Ireo mino izany hafatra izany ka miomana amin’ny alalan’ny fibebahana sy ny fanavaozana dia ho voavela ka ho voavonjy; fa izay manohitra ny fitalahoana sy ny fampitandremana avy amin’Andriamanitra kosa, izay natao tamin’ny alalan’i Noa dia manasaraka ny tenany amin’Andriamanitra, ary vokatr’izany, ilay famindrampo sy fitiavana tsy misy fetra dia hampitsahatra ny fitalahoany.
Nanohy nandresy lahatra ny fanahy mikomy ny Fanahin’Andriamanitra mandra-pahatongan’ny fahataperan’ny fetra, rehefa niditra ny sambofiara i Nôà sy ny ankohonany ka ny tanan’Andriamanitra no nanakatona ny varavaran’ny sambofiara. Niala avy teo amin’ny seza fiandrianana volamena ny famindrampo, tsy nanao fanelanelanana intsony ho an’ny mpanota meloka.
Tsy dia tena hoe jentilisa mpanompo sampy hiringiriny daholo tsy akory ny olona velona tamin'izany taranaka izany. Maro no nanana fahalalana an’Andriamanitra sy ny lalàny; fa tsy hoe mandà fotsiny ny hafatr’ilay mpitory feno finoana nilaza ny amin’ny fahamarinana ihany izy ireo fa nampiasa hery miasa mangina avy amin’izy ireo ihany hisakanana ny olona tsy hankato an’Andriamanitra. Misy vanim-potoana fitsarana sy fizahana ny tsirairay. Ny taranaka tamin’izany andro izany dia nanana tombontsoa sy fahazoa-mamaly ny antso raha mbola nampanakoako ny hafatra fampitandremana ny amin’ny fandravana izay ho avy tamin’izany i Nôà; saingy navelan’izy ireo hofehezin’i Satana ny sainy fa tsy hofehezin’Andriamanitra; nofitahin’i Satana izy ireo sahala amin’ny namitahany ireo ray aman-drenintsika tany am-boalohany. Haizina sy hala tahaka no nasolony ny fahazavana sy ny fahamarinana; ka dia nanaiky ny hevi-petsy sy ny lainga izy ireo satria izany no metimety tamin’izy ireo ary mifanaraka amin’ny fiainan’izy ireo efa mivaona rahateo kanefa ny fahamarinana izay nahavonjy azy ireo dia nolavina ary noheverina fa hevi-diso. ST,1 Aprily 1886.